* Isla-wayni iyo isbuufin xad dhaaf ah, qofka oo aaminsan inuu dadka kale wax dheer yahay, laga yaabo inuu la baxo magacyo dadku la yaabaan sida boqor, wasiir, ugaas IWM.
* Qofka oo aan u baahan hurdo, Sadax saac kaliya hadudu jiifto wuxuu dareemayaa inay ku filan tahay, isagoo firfircoon ayuuna soo toosaa, 24 saac oo xiriir ah inuusan jiifan ayaa laga yaabaa.
* Hadal iyo sheeko xad dhaaf ah oo weliba cadaadis iyo xawaare aan ku socdo, tanoo loo yaqaano "pressured speech".
* Hadalka oo aan mawduuc lahayn, fikraddii ku soo dhacdaba u wareego isagoo sheekadii hore aan dhameestirin, waxaa arintaan loo yaqaanaa "Flight of ideas"
* In qofka la maaweelin karo, lagana weecin karo hadafka hadalkiisa iyo meesha uu hadalka ula jeedo "distractibility"
* Dhaqdhaqaa xad dhaaf ah iyo wareegis xaafadda ah ama safar u bixis lama filaan ah "Hyperactivity".
* Isxakamayn la'aan iyo Xishood yari, qofka wuxuu si yaxyax la'aan ah uga hadlaa galmada iyo wixii la xiriiro, dareenkiisa dhinacaas ku saabsanne ma xakamayn karo tanoo keeni karta inuu khaladaad ku dhaco, dambine lagu oogo, haddii ay haween tahayne qofka xanuunsan kuma sii jirto, maxaayeelay ciddeedu waxay ka war heli karaan iyadoo uur leh, arintaan waxaa loo yaqaanaa "Disinhibition".
* Faraxsanaan dhalanteed ah, waa qofka oo ka muuqato farxad aan fasiraad lahayn ama aysan u qalmin xaalada uu ku sugan yahay, waxaana loo yaqaanaa "Euphoria"